मेलम्चीको पानी आउने कुरा कहिले हुन्छ पूरा ? - खबरमञ्च खबरमञ्च
मेलम्चीको पानी आउने कुरा कहिले हुन्छ पूरा ?
१६ मंसिर, खबरमञ्च, at 6:47 PM
By खबर मञ्च / December 2, 2018 / Comments Off on मेलम्चीको पानी आउने कुरा कहिले हुन्छ पूरा ?
काठमाडौँ । उपत्यकावासीको आशाको बिन्दु बनेको मेलम्चीको पानी ६० दिनमा राजधानीमा झार्ने खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि पनि पटकपटक मेलम्चीको पानी राजधानी झर्ने मिति मन्त्रालयले सार्दै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री विना मगरले दशैँको उपहारस्वरुप राजधानीवासीका धारामा मेलम्चीको पानी दिने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो।
तीन वर्षमा दोस्रो चरणको काम पनि सक्ने प्रतिबद्धता सचिव ठाकुरको छ । याङ्री र लार्के खोलासम्म पुग्न थप ११ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालगञ्ज र बुटवलमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानमा अनुचीत कार्य भएको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यसमा संलग्न सबैलाई कानूनी कारवाहीका लागि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको पनि सचिव ठाकुरले जानकारी दिए ।
समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले मेलम्चीले रजत जयन्ती मनाउन लागेको भनी व्यँग्यात्मक टिप्पणी गरिन् । बैठकमा सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको खानेपानी सेवाका बारेमा राखिएको छलफलमा मन्त्री विना मगर उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद झलनाथ खनालले व्यवस्थापिकाको छलफलमा कार्यपालिकाका जिम्मेवार अधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्को बैठकमा मन्त्री मगरलाई उपस्थित गराउन माग गरे ।
Published:5months ago on December 2, 2018
Last Modified: December 2, 2018 @ 6:47 pm
श्रम ऐन, श्रमिकका अधिकार र कर्तव्यका विषयमा सरोकारवालाबीच युनिकमको छलफल